Madaxweynaha Somaliya oo ballanqaad u sameeyay mid ka mid ah hablihii lagu kufsaday Galdogob | Baydhabo Online
Madaxweynaha Somaliya oo ballanqaad u sameeyay mid ka mid ah hablihii lagu kufsaday Galdogob
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, ayaa ballanqaad u sameeyay mid ka mid ah labadii hablood, ee bishii hore ee December lagu kufsaday Magaalada Galdogob ee Gobolka Mudug.
Kufsigan, ayaa waxaa uu soo shaac-baxay toddobaadkan uun, ka dib markii barraha bulshada lagu arkay muuqaalka mid ka mid ah hablaha la kufsaday. Muuqaalkan waxaa ka soo muuqday dhalinyaro yar yar oo fara xumeynaya gabadhaasi
Madaxweynaha Somaliya, ayaa war saxaafadeed ku sheegay in uu la xanuunsaday kufsiga iyo jirdilka ka dhacay Magaalada Galdodob, iyadoo Puntland uu ugu baaqay in cadaaladda la marsiiyo dembiile-yaasha.
“Aad iyo aad ayay ii xanuun-jisay falkii kufsiga iyo jirdilka ahaa ee ka dhacay Galdogob. Waxaan ku dhiirra-gelinaya Dowlad Goboleedka Puntland in sharciga la marsiiyo kuwii ka dambeeyay kufsiga gabadhaasi.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
Madaxweynaha, ayaa Culima’udiinka iyo Odayaasha Dhaqanka Puntland la wadaagay in aanay Dowladda Somaliya wax dulqaad ihi u lahayn kufsiga iyo cabsi gelinta dumarka Somaliyeed.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ballanqaad caafimaad oo dal iyo dibadba u sameeyay gabadhaasi, halkii ay noqoto in xaaladeeda wax looga qaban karo.
Shacbiga Somaliyeed, ayaa aragti mideysan ka qaatay dhibaatada loo gaystay hablahan, iyadoona ay cod kore ku baaqeen in cadaalad ay hellaan labada hablood ee la fara xumeeyay.
Culima’udiinka Somaliyeed, ayaa falka argagaxa xambaarsan ee ka dhacay Galdogob ku macneeyay, mid aanu xalkiisu ku jirin xeer dhaqan iyo xeer jajab midna, balse ay lagama maarmaan tahay in loola laabto Shareecada Alle.